हामी din99 हेक्स बोल्टको ठूलो संख्यामा स्टक गर्दछौं। यी हेक्स हेड बोल्ट आंशिक थ्रेडहरूको साथमा र DIN 1 1१ र DIN 33 3333 को अनुसार सम्पूर्ण लम्बाईमा थ्रेडेड जंग संरक्षणको लागि जिंक जस्ता जस्ता छन्।
DIN6921 फ्ल्यांज बोल्टमा रोटेसन रोक्ने प्रकार्य छ, जुन जडान हुने सतहको लागि उपलब्ध छ जुन समतल वा चिल्लो सतहको आवश्यकता हुन्छ। साथै, हाम्रो DIN6921 फ्ल्यांज बोल्ट इम्बेडेड कंक्रीट फाउन्डेशनका लागि उपयुक्त छ, र मेशिनहरू र उपकरणहरूको आधारहरू ठीक गर्न प्रयोग गरिन्छ। उचित आकार र कम्प्याक्ट डिजाइनको कारणले, यसलाई चारैतिर राख्न सकिन्छ सीमित स्थानहरूको रिक्त स्थानमा मद्दत गर्न। स्लिभर उपस्थिति राम्रो र सुन्दर देखिन्छ।
हट-डुबकी जस्ती हेक्सागोनल बोल्ट
उत्पादन नाम तातो डिप गल्वानाइजिंग हेक्स बोल्ट आकार M2-M160 सामग्री कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, तपाईंको आवश्यकता अनुसार। ग्रेड ग्रेड: 8.8 8. 8. 8. 10. १०.२ १२.ct Ect Surface Finishing Plain, Passivated, (ROHS) Zn-plated, Ni-plated, तपाईंको आवश्यकता अनुसार। मानक DIN जीबी आईएसओ JIS BS एएनएसआई प्रमाणीकरण ISO9001, SGS, गैर-मानक OEM उपलब्ध छ यदि तपाईं रेखाचित्र वा नमूना प्रदान गर्नुहुन्छ। प्याकेज मानक निर्यात प्याकिंग वा ग्राहकको आवश्यकता अनुसार ...
हट-डुबकी जस्ता एंटी-चोरी बोल्ट
नाम फास्टनर निर्माता विशेष बोल्ट विरोधी चोरी बोल्ट र नट मार्क ग्राहकको आवश्यकता अनुसार। सामग्री स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील फिनिश मैदानी, जिंक जिंक, कालो गुणवत्ता शीर्ष उच्च गुणवत्ता एन्टिक्रोरोसिव प्रदर्शन साल्ट स्प्रे परीक्षण पहुँच १०००-२००० घण्टा आवेदन मार्चरी, रसायन उद्योग, पर्यावरण, भवन प्रमाणन ISO9001 २०० Pac प्याकिंग कार्टन र प्यालेट वा ग्राहकको आवश्यकता अनुसार। डेलिभरी समय सामान्यतया १ 15 मा ...
हामी din99 हेक्स बोल्टको ठूलो संख्यामा स्टक गर्दछौं। यी हेक्स हेड बोल्ट आंशिक थ्रेडहरूको साथमा र DIN 1 1१ र DIN 33 3333 को अनुसार सम्पूर्ण लम्बाईमा थ्रेडेड जंग संरक्षणको लागि जिंक जस्ता जस्ता छन्। ब्रान्ड: जिउह एम १16 आकार din931 हेक्स बोल्ट, M20 व्यास din931 बोल्ट, M24 din931 मानक हेक्स बोल्ट, m30 din 1 1१ हेक्स बोल्ट, सबै स्टकमा। सामान्य उद्योगको हरेक क्षेत्रमा व्यापक प्रयोग।
यू-बोल्ट दुब्रे छेउमा स्क्रू थ्रेडको साथ अक्षर यूको आकारमा बोल्ट हो। कार्बन स्टील यू बोल्टको स्पष्ट अर्थ यू बोल्टको सामग्री कार्बन स्टील हो।
कार्बन स्टील यू बोल्ट मुख्यत: पाइपवर्क, पाइपहरू मार्फत प्रयोग गरिएको छ जसमा तरल पदार्थ र ग्यासहरू पास हुन्छन्। त्यस्तै, कार्बन स्टील यू-बोल्ट पाइप-वर्क इन्जिनियरि। स्पोक प्रयोग गरेर नाप्यो। कार्बन स्टील यू-बोल्टलाई समर्थन गर्ने पाइपको आकारले वर्णन गरिनेछ। कार्बन स्टील यू-बोल्ट पनि डोरी होल्ड गर्न प्रयोग गरिन्छ।